Umaka: ophendula ngokuzenzakalela | Martech Zone
Umugqa Womhlangano We-Autoresponder
NgoLwesithathu, ngoMashi 13, 2013 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Umjikelezo wakho wokumaketha awulandeli umjikelezo wakho wokuthenga. Hhayi nje ukuthi umkhankaso wakho ungahlelelwa ngesikhathi esingalungile, kungenzeka ukuthi ungalungiselelwa ukuhlinzeka ngemiyalezo edingekayo ngokuhamba kwesikhathi ukwenza amathuba abe yikhasimende. Amathuluzi wokuzenzakalela wokumaketha asedumile ezimakethe ngoba ahlinzeka ngethuba lokukhulisa iklayenti ngesikhathi lapho iklayenti lifisa ukuxhumana nalo. Amabhizinisi amaningi kakhulu avumela amathuba
NgoMsombuluko, Agasti 29, 2011 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
Ngempelasonto, ngishintshe isihloko sami se-WordPress sabuyela ku-Twenty Eleven. Ngingasho ngobuqotho ukuthi ngijabule ngomklamo manje. Ngiyivumelanise nentando yami futhi angizange ngize ngithinte ikhodi. Manje ungangizwa kabi, kunezikhathi lapho ngithanda ukudilika ungene esihlokweni bese ngigenca ukukhwabanisa, kepha ukubhuloga kunzima ngokwanele njengoba kunjalo. Angidingi ukucindezelwa okwengeziwe
Yini ububanzi bekhasi lewebhu elilungile?
NgoMsombuluko, Juni 8, 2009 NgoLwesihlanu, ngoJuni 20, i-2014 Douglas Karr
Ukuklama iwebhusayithi nokusetha ububanzi bekhasi lewebhu kububanzi obulungile yingxoxo okufanele ube nayo. Abaningi benu baqaphele ukuthi ngisanda kushintsha ububanzi bokwakheka kwebhulogi yami. Ngicindezele ububanzi bekhasi ngamaphikseli ayi-1048. Abanye benu bangahle bangavumelani nalokhu kuhamba - kepha bengifuna ukwabelana ngezibalo ezithile nezizathu zokuthi kungani ngicindezele ububanzi bengqikimba ngokubanzi. Amaphikseli ayi-1048 kwakungeyona into engahleliwe